China Containctive titanium dioxide rụpụta na ụlọ ọrụ | Noelson
NOELSON ™ Brand Conductive Titanium Dioxide EC-320 bụ ngwaahịa dị iche iche dabere na ogo titanium dioxide dị elu, na-arụ ọrụ site na ọgwụgwọ site na iji nanotechnology, bụ otu ụwa ghọtara usoro usoro 2 nke conductive ngwaahịa.
NOELSON ™ Brand Conductive Titanium Dioxide EC-320 bụ ngwaahịa ngwaahịa dabere na titanium dị elu dioxide, nhazi site na ọgwụgwọ site na iji nanotechnology, bụ otu ụwa ghọtara ọgbọ 2 conductive ngwaahịa usoro. Dika ihe eji eme ihe ohuru, EC-320 nwere otutu uru, dika: ìhè-agba, mfe chụgara, obosara applicability, elu conductivity, anticorrosion, inflaming retarding, ezi na-ezo ike, wdg Karịsịa a na-eji dochie anya dị oke ọnụ dị na ngwaahịa. Ruo ọtụtụ afọ, anyị na-amụ ihe nke ọma na ndị a ubi ma nweta ọganihu na-aga n'ihu. Anyị mma nke ngwaahịa nwere a na-eduga ọnọdụ na China.
NOELSON ™ EC-320 (C), bụ otu ụdị izugbe.
Ihe Nka na ụzụ Data
Njirimara Ọ dị mma na ịgbasa ọkụ, ezi ọkụ, ịdị ọcha na ike zoo
Thermo kwụsie ike ℃ ≥600-800
Chemical kwụsie ike Guzogide acid, alkali, na ihe na-edozi mmiri; Ọ dịghị ọxịdashọn; Na-agbanyeghachi azụ
Nkezi akụkụ urughuru (D50) 5um
Njupụta g / cm3 2.8-3.2
Mmanụ Mmanụ ml / 100g 35 ~ 45
Nguzogide Ω · cm .100
►EC-320 (C) na ọtụtụ-eji na coatings, plastik, roba, nrapado, ink, pụrụ iche akwụkwọ, na-ewu ihe, iche iche nke onyinye ihe, akwa eriri, electronic ngwaahịa, ite ụlọ ọrụ, wdg
►Conductive Titanium dioxide nwere ike maka nso na-acha ọcha ma ọ bụ ndị ọzọ na ìhè na agba mgbe nile conductive, antistatic ngwaahịa. Karịsịa emetụta ngwaahịa ndị ahụ na-eme ihe na antistatic nwere nnukwu ihe dị mkpa maka ịcha ọcha. Enwekwara ike iji ya mee ihe ndị ọzọ na agba ma ọ bụrụ na agbakwunye agba. Dika ebe ntinye ihe omuma ihe na abawanye, ebe ndi choro ọgwụgwọ na antistatic na-abawanye. Ya mere ìhè conductive ntụ ntụ usoro nwere ike ọtụtụ-eji.
►Conductivity arụmọrụ nke ihe na ihe ndozi na-adabere na teknụzụ nhazi na ihe nzacha metụtara, resin, onye nkwalite, ihe mgbaze na usoro ahụ, na-enwekwa mmetụta nke arụmọrụ nke ngwaahịa mkpuchi na sistemụ mkpuchi. N'ozuzu, ọ bụrụ na titanium dioxide conductive gbakwunyere 15% ~ 25% (PWC), nguzogide nwere ike ịbụ 105 ～ 106Ω • cm.
► Esemokwu dị n'etiti conductive titanium dioxide na conductive mica powder: Ọ dị mma ma ọ bụrụ na adịchaghị mma conductive mica ntụ ntụ eji mkpuchi usoro na ink. N'aka nke ọzọ, ọ ka mma ma ọ bụrụ na etinyere dioxide na-acha odo odo ma ọ bụ acicular na-eji na roba na plastik. N'ezie, nhazi ntụ ntụ dị iche iche na etu esi eji arụ ọrụ nwere ike nweta arụmọrụ ka mma. Ọmụmaatụ, ruru n'etiti conductive mica powder na conductive titanium dioxide: 4: 1 ~ 10: 1. Ọnọdụ jupụtara na-emetụta arụmọrụ arụmọrụ, na-ejuputa oge niile nwere mmetụta ka mma karịa ịjuju oge niile, enwere ike ịkọwa ya site na ịkpọtụrụ mpaghara. Ngwakọta nke ntụpọ ntụ ntụ na ntụ ntụ na -emepụta ihe ga-eme ka ọkụ eletrik na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ị na-arụpụta mkpuchi mkpuchi ala, ma belata ọtụtụ ego. Ngwakọta gburugburu na acicular iji mee nwere ike ịgbanwe ọnọdụ ndozi nke ntụ ntụ ntụ, ụdị kọntaktị ndị ọzọ nwetara: flake na flake, flake with point, and point with point, si otú a rụpụta nrụpụta eletrik kawanye mma.
► N'okpuru uru dị oke egwu, arụmọrụ nke ihe ga-akawanye mma site na mmụba nke mgbakwunye mmako nke ntụ ntụ ntụ, na mgbe nke ahụ gasịrị, nrụpụta ga-amalite ọkwa dị elu ma ọ bụ dị ala.
NOELSON ™ Brand conductive & and anti-static agents series, bụ ugbu a na-eduga mmepe emeputa na mbara ụdị maka ngwa na nkwalite ngwaahịa nke conductive ntụ ntụ na ihe na China na wields a otutu mmetụta anụ ụlọ na esenidụt. Ngwaahịa niile anyị na-eweta nwere ezigbo mma na ọnụ ahịa asọmpi. E wezụga ngwaahịa anyị na-enye, anyị na-enye ọrụ zuru ezu na nke zuru oke, ahịa na ọrụ logistic na ndị ahịa niile.
10-25KGS / akpa ma ọ bụ 25KGS / Akwụkwọ tube 14-18MT / 20'FCL akpa.
Nke gara aga: Zinc phosphate aluminom
Osote: Superfine Ferro-phosphorous ntụ ntụ